Indawo yokudlela Archives - IntoKildare
Indawo yokudlela yaseKildare ingenye yezinto ezinhle kakhulu ezweni, kusukela ekudleni okunethezeka kuya ekudleni okuhle okunenkanyezi kaMicrosoft, kunezindawo zokudlela zalo lonke ulwanga.
Into eyodwa iqinisekile, awusoze walamba ngenkathi uhamba kulo lonke elase-County Kildare. Lapha, abapheki babheka umhlaba nolwandle ukuze bathole ugqozi ekudaleni amamenyu abo. Ukudla kwasolwandle okuthelwe ngokuqondile olwandle, umkhiqizo omusha ovela kubalimi bendawo, namamenyu ashintshayo akhelwe eduze nalokho okusesizini ayisisekelo esigcawini sokudlela sase-Kildare. Ukuze uthole inketho elula kunezindawo zokudlela ezinikeza ikhofi, amakhekhe, amasemishi no-ayisikhilimu. Noma kulabo abagijimayo ama-takeaway amaningi nezitolo zingakwanelisa ngokushesha ukulamba kwakho. Kuso sonke isifunda, abapheki abanekhono balinde ukukhombisa ngendalo yabo ekhethekayo ezokwenza ukuthi ubuye imizuzwana. Noma ngabe ufunani, uzosala ucekelwe phansi ukuze ukhethe izindawo ongadla kuzo e-Kildare.
I-gastropub ewine umklomelo ekhiqiza ngokucophelela umkhiqizo wayo futhi izenzele ukukhetha kwayo kwezinsimbi nobhiya wobuciko. Umuzwa omuhle wokudlela nenani lemali.
I-Butt Mullins yibhizinisi lokugijima lomndeni elaziwa ngokusebenzela amakhasimende okufudumele nokunaka imininingwane iminyaka engaphezu kwengu-30.
I-lemongrass Fusion Naas inikeza ukuhlangana okumnandi kwe-cuisine engcono kakhulu yePan-Asia.
Kutholakala eceleni kweGran Canal eSallins, iLock13 yiKildare's 1st Ever Brewpub.
Cuisine yakudala yase-Ireland evela kumpheki uSean Smith emaphandleni aseKildare.
Umuzwa wokudlela womndeni okhululekile obheke iGran Canal.